Tsy manafina na inona na inona ny Baiboly
"Fa velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela… ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan’ny fo. " Hebreo 4:12
"… Jehovah Tompo ô, … Ianao no Andriamanitra, ary marina ny teninao. " 2 Samoela 7:28
Tiana ny mahare zavatra mahafinaritra, ary ny fahamarinana mikasika zavatra sasantsasany heverina ho manohintohina, dia matetika ahodinkodina na takontakonana. Ny tantaran’olo-malaza maro dia indraindray miorina amina porofo somary miandany. Ohatra, tany Egypta fahiny, dia tsy notantaraina ireo ady rehefa resy ; ny hany notanana an-tsoratra dia izay nampisongadina na nanome voninahitra izay Farao nanjaka.
Tsy mba toy izany ao amin’ny Baiboly. Fantatra mandraka ankehitriny ny fahalemena sy fahotan’ny olo-malaza rehetra lazainy, manomboka amin’i Mosesy ka hatramin’i Paoly apostoly, ary ireo hafa maro anelanelany. Tsy afenin’Andriamanitra amintsika izany. Ireo mpanompony, araka izay nitondran’ny Fanahy Masina azy (2 Petera 1. 21), dia niresaka ny lafim-piainana rehetra ary tsy namboamboatra izany : ny ratsy, ny tsara, ny momba ny firaisana ara-nofo, ny fanambadiana, ny fahanterana, ny asa, ny ady, ny fandriampahalemana, sns. Velona ny Tenin’Andriamanitra, satria, amin’ny fotoana rehetra, ny tsirairay dia afaka mahita fa miteny aminy manokana Andriamanitra. Fahazavana lehibe no itarafany ny fihevitra, ny fitondrantena, ny tanjona ananantsika. Asongadiny ny fifanoheran’ny tsara sy ny ratsy.
Mihoatra noho izany aza, ny Tenin’Andriamanitra dia manova ny fiainan’izay mandray azy am-pinoana. An-tapitrisany ireo lehilahy, vehivavy, ankizy, tanora ary zokiolona afaka mijoro ho vavolombelona sy manamafy fa nanova ny fiainany ny Tenin’Andriamanitra. Manambara mazava io Teny io fa mpanota aho eo anatrehan’Ilay Andriamanitra masina sy marina. Fa miaraka amin’izany koa, dia asehony ahy ny fitiavan’i Jesosy Kristy Zanany, natolotra noho ny fahadisoako ary natsangana indray ho fanamarinana ahy (Romana 4. 25).